Txt Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado TXT Faylal ay ku MAX / Windows
> Resource > Ladnaansho > Txt Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado TXT Faylal ay ku Mac / Windows
Sidee baan ka My Mac soo kaban karto, tirtiray Txt Files?
Hello, waxaan haystaa file qoraalka taas oo ka kooban macluumaad muhiim ah oo badan. Kac ahayn ayaan u masixi ka Mac, laakiin anigu ma macnaheedu loo sameeyo. Haatan waxaan doonayaa file text in dib. Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado files txt aan la tirtiro?
Waxaa jira laba xal inuu ka soo kabsado txt files: dayactiro file a txt musuqmaasuq ama ka soo kabsadaan file ah qoraalka la tirtiray ama laga badiyay. Si aad u soo kabsado tirtiray ama laga badiyay files txt, aad si fudud u isticmaali kartaa software kabashada txt inuu ka soo kabsado iyaga.
Wondershare Data Recovery for Mac ama Wondershare Data Recovery dadka isticmaala Windows waa barnaamij soo kabashada txt si degdeg ah oo ammaan ah oo aad ka bogsato tirtiray txt files ka your computer, drive dibadda adag, kaarka qalabka SD kaydinta iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah si ay u bilaabaan dib u soo kabashada. Caadi ahaan, haddii aad laga badiyay files txt aan la overwritten ama dhaawac, waxaad soo kaban karto iyaga.
Qabtaan Recovery File TXT masaxay ama Lost in 3 Talaabooyinka
Halkan waxaan isku dayi la Wondershare Data Recovery for Mac (isticmaalayaasha Mac). Haddii aad isticmaalayso Windows computer ah, fadlan version Windows iyo akhriyo Wondershare Data Recovery (for Windows) hage user .
Tallaabada 1 Dooro Mode Recovery ah inuu ka soo kabsado Your Txt Files
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya barnaamijka, waxaad heli doontaa 4 hababka soo kabashada uu ka soo xusho, sida aad ka arki kartaa image hoose. Dhammaan 4 hababka leeyihiin expatiations gaar ah, waxaad dooran kartaa wax kasta oo hab aad rabto in aad isticmaasho si waafaqsan tilmaamaha kooban.
Inuu ka soo kabsado tirtiray ama laga badiyay txt files, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" hore. Hab waa ka dhaqsi badan tahay inay soo dhiciyaan text tirtiray Waxay bixisaa filenames asalka ah ee files iyo qaadataa waqti er gaaban baar your computer.
Fiiro gaar ah: Haddii hab aysan taasi si fiican u shaqeeyo, waxaad isku dayi kartaa "ceeriin Recovery" oo kale 2 hababka, ay u baahan yihiin iskaanka-wakhti ka sii dheer.
Tallaabada 2 Dooro Drive Logical si Sawirka
In tallaabadaas, drives adag iyo aaladaha kaydinta dibadda oo dhan lagu baari doono barnaamijkan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan drive adag meesha aad badiyay txt files si scan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado files txt ka qalab lagu kaydiyo dibadda, fadlan dooro warqad ay drive.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Details of Khasaaray faylasha iyo kaban ee Mac
Halkan waxaan ku soo tallaabada final. Marka qasac ka baxayo, faylasha helo waa la qori doonaa fayl ama ay categoriy Waxaad ku eegaan karaa magacyada helin txt files si aad u hubiso in ay yihiin faylasha aad rabto in aad dib u soo ceshano ama aan.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan files txt aad rabto in aad soo kabsadaan ka dibna riix "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac
Fiiro Gaar ah: Wixii ammaanka ee soo kabashada, fadlan ha ka badbaadin file ka soo kabsaday back to drive asalka macquul ah ama qalab lagu kaydiyo dibadda.